Izinhlobo ze-6 zamatafula asembhedeni wokuhlinzeka igumbi lokulala | Bezzia
Izinhlobo ezi-6 zamatafula asembhedeni wokuhlinzeka igumbi lokulala
UMaria vazquez | 30/04/2021 18:00 | Ifenisha
Ama-nightstand ayingxenye yalelo qembu lefenisha lokho sibheka kubalulekile egumbini lokulala. Bangabahlanganyeli abakhulu ukukhulisa umthamo wokugcina wegumbi lokulala futhi kubalulekile ukuthi sibe nazo zonke lezo zinto esingazidinga lapho silala futhi sivuka.
Yiziphi izinto ozisebenzisayo ngaphambi kokulala nalapho uvuka? Yiziphi ezinye izinto ngaphandle kwalezo ongathanda ukuzihlela ku-nightstand? Fundisisa izidingo zakho ezingokoqobo, nquma ukuthi isiphi isitayela se-nightstand esivumelana kahle nobuhle bekamelo lokulala bese ukhetha esifanelana kahle nezidingo zakho.
2 I-Nordic iphefumulelwe
3 Isitayela Classic futhi eyinkimbinkimbi
Izindwangu zasebusuku ezintantayo ziyindlela enhle yokwenza ukuhlobisa izikhala ezincane. Uma ungenayo indawo eningi ohlangothini lombhede noma ungafuni ukufaka ikamelo kabusha ngefenisha enkulu, lokhu kuba umlingani omkhulu ngezizathu ezahlukahlukene:
Ziyakhanya ngokubukeka. Bandisa umuzwa wobubanzi egumbini ababekwe kulo.
Bathatha isikhala esincane. Ubungako bamamodeli amaningi entanta buzokuvumela ukuthi ubabeke ezindaweni ezincane lapho itafula elijwayelekile lingenandawo khona.
Bavumela ukuhlanza phansi ngokunethezeka. Zinqunyelwe odongeni okubavimbela ekunyakazeni. Kodwa-ke, ngokukhushulwa, benza lula ukuhlanzwa kwegumbi nsuku zonke.
Zihlobisa kakhulu. Ngokuma ngaphandle kwamatafula wendabuko, banikeza igumbi ukuthinta kwangempela.
Amatafula okhuni entantayo namuhla athandwa kakhulu ukuhlobisa igumbi lokulala ngenxa yemfudumalo abaletha yona. Yize labo abane imiklamo emincane ngamathoni akhanyayo: abamhlophe, okhilimu, izimpunga… bathatha indawo yokuqala emakamelweni okulala ane-aesthetics yesimanje. Ungabathola ngidilowa elilodwa noma amabili ukukhulisa umthamo wabo wokugcina kanye / noma nokukhanya okwakhelwe ngaphakathi ukuze kungadingeki ukubeka isibani kuso.
El isitayela se-nordic Sekuyiminyaka eyishumi edlule ibhentshimakhi ekwakhiweni kwangaphakathi. Ukuhlanganisa izinkuni zemvelo nemininingwane emhlophe, amatafula alesi sitayela aletha ukukhanya nokufudumala emakamelweni okulala ezitayela ezahlukene. Emilenzeni emine, imvamisa iba nedilowa elilodwa noma amabili azokuvumela ukuthi ube nezinto ezibalulekile eduze kombhede.
1. Ikhaya leNunila-Kave, 2. Sklum, 3. Larsen-Made, 4. Sklum
Isitayela Classic futhi eyinkimbinkimbi
Ubuhle nokucwaninga kuchaza isitayela sekamelo lakho lokulala? Uma kunjalo, lezi zingqimba zokulala ebusuku zizongena kahle kuwo. Labo abahlanganisa i- okukhanyayo okumhlophe okunezinto zegolide Yizona ezithandwa kakhulu ekuhlobiseni amakamelo okulala anezindonga ezimhlophe, ophahleni abaphezulu abanokubumba namawindi amakhulu.
Amatafula amancane kaMade no-Ikea Ukuthinta kwesimanje, noma kunjalo, kuzonikeza igumbi lokulala i- imiklamo yombala omnyama amajamo aqondile nesitayela esincane. Ngabe unesibindi ngombala? Imiklamo ehlanganisa ukwakheka, imigqa namajika, njenge-Made's, izonikeza ikamelo lakho lokulala lelo bhalansi phakathi kwezakudala nezanamuhla.
Isitayela sezimboni amatafula ombhede ngokuvamile inesakhiwo sensimbi. Abanye bagqugquzelwa ukwakhiwa kwalawo malokhi ensimbi ayesetshenziswa esikhathini esedlule ezimbonini, ezibhedlela noma emanyuvesi, yize ejwayele ukubuyekezwa ngomumo oyindilinga nombala.
1.Savoi-Kave Home, 2.Bavi-Sklum, 3. Trixie-Kave Home, 4.Nikkeby-Ikea, 5.Kluis-Miv Interiors Kuyinsakavukela ukuthola imiklamo ethi hlanganisa insimbi nokhuni ukuze kuzuzwe imiklamo efudumele. Lapho lezi zinto zisetshenziswa ngokwemvelo futhi zimagebhugebhu, isitayela sefektri yezimboni siyathuthukiswa. Lapho ihlangana kakhulu futhi ipholishiwe, isondele kakhulu kubuhle banamuhla.
Ukunikeza ukuthinta kothando ekamelweni lakho lokulala, ngeke uthole umlingani ongcono kunalawo ma-nightstand abonakala sengathi asanda kuphuma egumbini lika-gogo wakho. Imiklamo enemilenze ephendukile, imigqa egobile nezindawo ezimhlophe ezihlutshiwe kuyindlela enhle, yize singeke sikhiphe ngaphandle labo abanayo anezikhala panel noma cannage.
1. Ikea, 2. Vilmupa, 3. Ikhaya leKave, 4. Vilmupa
Abanakho ukuvelela okufana nokwama-nightstand angunxande futhi asikholelwa ukuthi abasoze baba nakho, kepha bayindlela ethandwa kakhulu. Ngokuvamile kwenziwa ku- ukhuni olunamacwecwe ngamathoni e-satin noma nge-glitter, banamandla amakhulu okuhlobisa.
Ikhaya laseKurb-Kave, 1. I-Odie-Made, i-2.I-Cairn Made, i-Babel 3-Sklum
Ukubukeka kulula, bangasihlinzeka ngamadilowa angafika kwamathathu ukugcina izinto. Kodwa-ke, lokhu kungenzeka kungabi njengokusebenziseka njengalezo ezinokubunjwa kwesikwele. Kungani? Ngoba kunzima kakhulu, kunikezwe ukwakheka kwayo, ukusizakala ngendawo yokugcina abasinika yona.
Hlobo luni lwasebusuku ongakhetha ukuhlinzeka ngalo ikamelo lakho lokulala?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ifenisha » Izinhlobo ezi-6 zamatafula asembhedeni wokuhlinzeka igumbi lokulala
Kungcono yini ukuthi izingane zihambe zingafake zicathulo?